Kwethulwa: I-Red Giant Qedile Yabantu Bodwa, Abafundi Nabafundisi, Ukubhaliswa Kwonyaka Kokufinyelela Konke Ekuhlelweni, Kwimifanekiso Ye-Motion kanye Namathuluzi e-VFX | Izindaba zeNAB | I-2020 NAB Show Media Partner kanye noMkhiqizi we-NAB Show LIVE. Izindaba Zobunjiniyela Zokusakaza
Ikhaya » Izindaba » Kwethulwa: I-Red Giant Qedela Abantu Abodwa, Abafundi Nabafundisi, Ukubhaliswa Kwonyaka Kokufinyelela Konke Ekuhlelweni, Kwimifanekiso Ye-Motion kanye Namathuluzi e-VFX
Kwethulwa: I-Red Giant Qedela Abantu Abodwa, Abafundi Nabafundisi, Ukubhaliswa Kwonyaka Kokufinyelela Konke Ekuhlelweni, Kwimifanekiso Ye-Motion kanye Namathuluzi e-VFX
EPortland, NOMA - Novemba 25, 2019 - I-Red Giant namuhla umemezele ukutholakala kwe I-Red Giant Qedile ngabantu, abafundi nothisha. Ukwandisa izinketho zayo zokuthola amalayisense esoftware, iRed Giant Complete iyinsiza yokubhalisa enikeza abahleli, abahleli bokunyakaza nezingcweti ze-VFX wonke amathuluzi eRed Giant ngentengo eyodwa ephansi - iTrapcode Suite, iMag Bullet Suite, i-Universe, i-VFX Suite ne-Shooter Suite. NgeRed Giant Complete, ababhalisile minyaka yonke bazoba nezinhlobo zakamuva kakhulu zamathuluzi, bonge izinkulungwane zamaRandi phezu kwelayisense yendabuko engapheli.
Bukela manje: I-Red Giant Qedile
“I-Red Giant Complete ibilokhu itholakala kumakhasimende ethu evolumu iminyaka, izinkulungwane zamalayisense asetshenziswa emisakazweni yokusakaza, kuma-studio ezithombe namayunivesithi. Futhi manje, ngenxa yesibalo esithandwayo, sijabule kakhulu ukunikela ngamalayisense wokubhalisa kuwo wonke amakhasimende ethu, ”kusho uChad Bechert, umphathi weRed Giant. “Ngasikhathi sinye, akukho okushintshile. Ngenkathi sicabanga ukuthi iRed Giant Complete iyisivumelwano esimangalisayo, Siyazi ukuthi amanye amakhasimende athambile kakhulu ukuthenga isoftware ngendlela yendabuko. Sifuna ukwenza isiqiniseko sokuthi umphakathi wethu wabaculi abanethalente uyakudinga, ngakho-ke siyaqhubeka nokunikeza amalayisense waphakade ngamanani abo ajwayelekile. ”
I-Red Giant Qedela yi- $ 599 ngonyaka kubantu noma $ $ 299 yabafundi nothisha. Hlola blog Red Giant ukufunda kabanzi ngokuthi ungashintshela kanjani kuRed Giant Gcwalisa futhi kungani manje isikhathi esihle sokwenza ukushintshwa, ngesipesheli sesikhashana, senkokhelo yesikhashana kuphela kumakhasimende asunguliwe eSuite (bona imininingwane engezansi).
Izinzuzo zeRed Giant Qedile
Ukufinyelela konke - I-Red Giant Complete inika abaculi ukufinyelela okugcwele kusethi ephelele yamathuluzi eRed Giant - kufaka phakathi wonke amasudi womkhiqizo amane ne-Universe.
Kusesikhathini - I-Red Giant Complete ifaka phakathi ukuthuthukiswa kwamahhala, ngakho-ke abasebenzisi bayohlala benokuhlelwa kwakamuva, ihluzo zokunyakaza namathuluzi we-VFX, okwamanje bavuselelwa.
Ukulondolozwa Okukhulu - Nge-Red Giant Complete, abantu, abafundi nothisha bazokonga izinkulungwane zamaRandi. Ukuthenga wonke amathuluzi weRed Giant kungabiza u- $ 3,495. Ngamanani obhalisele kungathatha iminyaka engu-5 ukukhokha inani elifanayo lamalayisense ahlala njalo - futhi lokho ngeke kufake izindleko zokuvuselela.
I-Red Giant ephelele ifaka:
I-Trapcode Suite (reg. $ 999): Amathuluzi abaluleke kakhulu embonini wokwenza i-3D ihluzo zokuhamba nemiphumela yokubonakalayo ku-Adobe® Ngemuva kwe-Effects®, manje enenjini ye-Dynamic Fluids ™.
I-Magic Bullet Suite (reg. $ 899): Kusetshenziswe kahle ukulungisa imibala, ukuqeda kanye nokubukeka kwefilimu, Umlingo Bullet Suite 13 unikeza abahleli nabenzi befilimu konke okudingekayo ukwenza i-footage ibukeke ilungile, ngasohlangothini lwezikhathi zokuhlela.
Universe (reg. $ 199 / year): Ukuqoqwa kweRed Giant kwama-plugins asheshayo we-80 GPU-asheshisa abahleli nabaculi begraphics abaculi.
I-VFX Suite (reg. $ 999): The suite all new of keying, tracking, cleanup and visual visual compositing amathuluzi, konke okulungile ngaphakathi kwe-Adobe Ngemuva Kwemiphumela.
Bhalobhasha Suite (reg. $ 399): I-Shooter Suite 13.0 iqoqo lezinhlelo zokusebenza ezakhelwe inhloso, kufaka phakathi i-PluralEyes ehola phambili embonini, enikeza abaqondisi bezithombe, ama-videographs, abacibisheli nabenzi bamabhayisikobho amandla okuletha i-footage kusuka kusethi kuya ekuthumeleni.
Ingqikithi uma ithengwe ngokwahlukana: $ 3,495
I-Red Giant Qedile: $ 599 / YEAR
Thuthukisa Manje nge-50% Off Red Giant Complete
Okwalabo abanamalayisense weRed Giant wamanje wanoma yisiphi isisetshenziswa somkhiqizo, noma okubhaliselwe ku-Universe, iRed Giant inikeza ukuthuthukiswa okukhethekile kuRed Giant Qedela nge- $ 299 - lokho yi-50% isuswe onyakeni wokuqala weRed Giant Complete *.
Sebenzisa ikhodi yekhuphoni: RGC50
Thuthukisa Ukuphela Okunikezwayo: 2 / 25 / 20
Abafundi nothisha abananoma iyiphi iRed Giant Suite noma ababhalisele ukusebenzela i-Universe, abakwaRed Giant bahlinzeka ngokukhushulwa okukhethekile kuRed Giant Qedela ngo- $ 149 kuphela.
Sebenzisa ikhodi yekhuphoni: RGC50A
* Ukunikezwa kwe-50% off Red Giant Complete ngabantu, abafundi nothisha kusebenza kuphela onyakeni wokuqala wokubhalisa konyaka.
I-Red Giant Qedela Amakhasimende wevolumu
Uma ibhizinisi ukuthenga amalayisense amahlanu noma ngaphezulu, hlola iRed Giant's Volume Program (www.redgiant.com/volume/), okubandakanya izici ezengeziwe ezigxile kubhizinisi njengemvume yokuntanta, ukuthunyelwa kude, ukusekelwa okuthuthukile, ukuqeqeshwa nokuningi.
I-Red Giant Complete yenziwa ngam suites ahlukahlukene ahlukene, ngayinye inesethi yayo yamathuluzi nemininingwane yokuhambisana nesihlobo. Yonke ithuluzi isebenza ku-Mac naku-Windows futhi iyahambelana ne-Adobe After Effects, kanti amanye amathuluzi nawo asebenza kwezinye izinhlelo zokusebenza ezengeziwe zokubamba. Vakashela iRed Giant ikhasi lokuhambisana ukufunda kabanzi ngomkhiqizo ngamunye.
Isithembiso esibomvu ukuzibophezela kukaRed Giant enjabulweni yamakhasimende, ngaphandle kokuthenga. Funda ngesibambiso se-Red Parant at www.redgiant.com/company/red-pledge/.
Cela i-Red Giant Complete Media Kit Kit
Amalungu emidiya ayamenywa ukuthi abukeze iRed Giant Complete kanye nanoma yimaphi amathuluzi noma amasudi womkhiqizo avela eRed Giant. Ngeminye imininingwane noma ukucela ikhithi yokubuyekezwa komkhiqizo, sicela uxhumane noMegan Linebarger ku- [Email protected].
Mayelana ne-Red Giant
I-Red Giant iyinkampani yesofthiwe eyenziwe ngabaculi abanekhono kanye nezobuchwepheshe abambisana ukudala amathuluzi ayingqayizivele kubenzi befilimu, abahleli, abaculi be-VFX, nabaqambi bokuhamba. Inkambiso yethu yenkampani igxile ekutholeni ukulinganisela phakathi komsebenzi nokuphila - siyibiza ngokuthi "imigqa ephindwe kabili" - lefilosofi isisiza ukuba singanaki ukuxakaniswa ekuthuthukiseni amathuluzi alula ahlinzeka ngemiphumela emikhulu. Phakathi neminyaka eyishumi edlule, imikhiqizo yethu (njengoMicrosoft Bullet, Trapcode, Universe and PluralYesyes) ibe yindinganiso embukisweni we-ifilimu nokusakaza ngemuva kokukhiqizwa. Ngabasebenzisi abangaphezulu kwe-250,000, akunakwenzeka ukubuka imizuzu ye-20 ye-TV ngaphandle kokubona isofthiwe yethu isetshenziswa. Kusukela ekuhlangenwe nakho kwethu njengabalingisi nabenzi befilimu, asifisi nje ukuhlinzeka ngamathuluzi abaculi, kepha ugqozi kanye. Buka amafilimu ethu, funda kusuka kuma-tutorials angaphezu kwama-200, noma zama i-software yethu www.redgiant.com.
I-Zazil Media Group
I-IPV Imemezela i-MAM: Kuchazwe amaWebinar Wokuhamba Komsebenzi Wanyanga Zonke - Septemba 18, 2020
Ukusakazwa kweKABB Fox San Antonio kanye nezigaba zesimo sezulu zokusakaza bukhoma ngeBlackmagic Design - Septemba 18, 2020
Hlangana nabadali abasemkhankasweni weN SpaceX we-NASA #Qalisa iMelika Mission - Septemba 17, 2020
Memezela i-Aurora Health Campaign / I-Colonie Injini yokusakaza Ukusakaza Ubuchwepheshe Ukusakazwa-Abezindaba Komphakathi Ukusakaza-SocialMedia Ukusakaza-SocialMeida Ukuhlela I-Graham Chapman i-Prmoted to Editor SJGolden - Ama-spears nama-Arrows I-Colonie I-Colonie - Izindaba I-COLONIE / Chicago I-Ultra HD Forum Umlingisi wevidiyo 2019-11-25
Ngaphambilini: Umsindo Lounge wethula Isevisi yePodcast
Olandelayo: Ama-CRM Studios Namanje Aqhubeka Eqinile Ne-Facilis